ခင်ဦးသာ| December 18, 2012 | Hits:10,159
ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အပြီးသတ် သဘောတူညီချက်တွေ ရနိုင်မလားမြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပါဝင်ခွင့်ရရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆိုမြန်မာကို လုံခြုံရေး အကူအညီ ကန့်သတ်မည့် အမေရိကန် ဥပဒေကြမ်း သမ္မတရုံး ဝေဖန်ISIS စစ်သွေးကြွများကို ချေမှုန်းမည်ဟု အိုဘားမား ကတိပေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်တွေ မေ့ပြီလား
Salai Lian December 19, 2012 - 4:24 am We are eager to hear from the US Ambassador what he sees in Kachin State and what his evaluation is. I am so glad that he sees with his own eyes. Making the Kachins become refugees on their own land is eternal history of the so-called democratic government under the leadership of Thein Sein.